Sii wadida waxbarashada xagaaga oo dhan!
Hoos waxaad ka heli doontaa ilo maxalli ah oo wax ku ool ah oo kaa caawinaya inaad waxbarashada sii xoogaysato xagaaga oo dhan. Waa kuwan talooyin muhiim ah oo ka socda hawlwadeenadeena, Halyeeyada Waxbarashada, sida aad u qaadan karto si aad u hesho kaalmooyinka xagaaga ee ugu fiican ilmahaaga!
1. Dib u eeg Xirfadaha Muhiimka ah
Kahor intuusan dugsigu bixin, weydii macalinka xirfadaha gaarka ah ee ugu muhiimsan ee canuggaaga ku shaqeynayo xagaaga. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa Hubinta Diyaarsanaanta si aad u ogaatid sida cunugaagu u yahay xirfadaha xisaabta ee heer-fasal ah oo aad ugu xirnaato madadaalo, agab si sahlan loo isticmaalo oo xaga waxbarashada xagaaga ah si ilmahaaga looga caawiyo ku celcelinta xirfadahan maalin kasta. Adeegso Qalabkan Qorshaynta Waalidka-Macallinka Xagaaga si aad u bilowdo.
2. La xiriir waxa muhiimka ah
Waa kuma cunugaaga inta ugu badan xiiseeya inaad waqti la qaadato? Muxuu xiiseeyaa ilmahaagu? Maxaa ka dhiga inay iftiimiyaan kalsooni? Raadi oo ku tiirsanaaw xagaagan. Tani waxay kaa caawin doontaa cunugaaga inuu ku dhiirado inuu waxbarto. Tusaale ahaan, si loo dhiso xirfadaha wada xiriirka, ku marti qaado ilmahaaga iyo saaxiibadood inay sameeyaan "qor oo u sheeg" si ay u wadaagaan waxa ugu badan ee ay isku seegeen.
3. Dib u milicso horumarka
La wadaag waxa aad ka ogaatid horumarka ilmahaaga barayaasha, hogaamiyaasha barnaamijka xagaaga iyo macallimiinta cusub ee deyrta. Tusaale ahaan, "fasalkayga 4aad wuxuu ubaahan yahay in laga taageero dhibaatooyinka xagga erayga ah ee ku lug leh isku dhufashada iyo qaybinta." Waxaad tahay khabiirka ilmahaaga. Macallimiintu waxay u baahan yihiin fikradahaaga iyo su'aalahaaga. Adeegso Qalabka Qorshaynta Waalidka-Macallinka si aad u qorto waxa aad ka ogaatay ilmahaaga xagaagan. Tilmaam: Uma baahnid inaad sugto shirarka Deyrta si aad ula xiriirto macallinka.
Waa maxay fasalka ilmahaagu?
Dugsiga Hoose / Dhexe (K-8)
Maxaa ku habboon qoyskaaga?
Taageero ficil ah
Taageero shaqisi ahaan
taageerooyinka dalwaddii iyo kaamamkii
Camp Kinda - Camp Kinda waa waayo-aragnimo barasho sahamineed oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo carruurta da'doodu tahay 3-13, si xiiso leh, iyo baashaal xitaa haddii ay guriga ku xayiran yihiin. Waa sida xerada xagaaga (kinda).
Waxbadan ka baro halkan!
Learning Tools - Ilaha waxbarasho ee online-ka ah ee ururada lagu kalsoon yahay si looga caawiyo ilmahaaga inuu ku guuleysto dugsiga. Waxaa loo xushay fasalka iyo maadada cunugaaga si loo arko ilaha ugu fiican ee bilaashka ah ee internetka la bixin karo!
The Scholar Squad Qoysasku waxay helayaan la-talin fool-ka-fool ah oo lala yeelanayo bare/tabbare khibrad leh si ay dib ugu eegaan horumarka ilmahaaga iyo inay bartaan waxqabadyada la caddeeyey, ka helaan su'aalaha laga jawaabo ee ku saabsan horumarka akhriska iyo qorista ilmahaaga, iyo inay helaan caawimaad lagu aqoonsado taageero dheeri ah oo caawin karta, oo ay ku jiraan Akhriska / Xisaab umeerinta wax ku oolka ah ee Corps iyo howlo aad ku qaban karto guriga si aad u taageerto barashada.
For children birth to five, they use an evidence-based curriculum and provide activities to support development, growth, and school-readiness – as well as any specific goals parents may have for themselves, their children or their families! Their elementary learners receive literacy support to improve reading, comprehension and writing skills. You can learn more about our program online at waytogrow.org/enroll ama wac 612-874-4740.
Summer Scholars - Kani maahan dugsiga xagaaga oo keliya. Waa khibrad xagaaga ah oo hal-abuur leh, oo carqalad ku ah cunugaaga si uu u sahamiyo adduun suurtogal ah fasalka gudihiisa iyo dibeddiisaba. Xitaa ma dareemi doontid inaad wax barato maadaama ay toosayaan wadadooda, ku hamminayaan fikrado cusub, macnona uga helayaan wax kasta oo ay abuurayaan. Dhammaan inta la helayo siyaabo aan dhammaad lahayn oo loola xiriiro asxaabta iyo danahooda.
Community Education Youth Summer Programming - Barnaamijyada Dhalinyarada iyo Dadka Waaweyn waxay ku faraxsan yihiin inay kuu soo bandhigaan khibrado cusub oo xagaaga ah oo ku siinaya kobcin waxbarasho, dhisid xirfad, dareen bulsho, barasho bulsho iyo shucuur, iyo fursado madadaalo! Fiiri ikhtiyaarradeena bilaashka ah ama jaban, , shaqsi ahaanta ee Minneapolis oo dhan. Habee jadwal si aad ula kulanto baahiyahaaga oo ay ku jiraan maalin dhan, Fasalo toddobaadle ah Galin hore iyo Galindabe ba illaa siddeed toddobaad laga bilaabo Juun.
Summer Activities at the YMCA - Ka baaraandeg noocyada kala duwan ee Waxqabadyada Y iyo Xagaaga in ka badan 60 goobood oo metro-area ah. Barnaamijyada xagaaga waxaa ku jira ikhtiyaarro seddex, afar, iyo shan maalmood oo dabacsan. YMCA waxay kaloo bixisaa kaamamka xagaaga iyo nashaadaadyo kale oo takhasus gaar ah leh. Waxaa jira wax xiiso u leh qof walba.
YMCA Summer Camps - Xeryaha Y waxay wadaagaan hal shay: waxay ku saabsan yihiin daah-fur. Caruurta, dhalinyarada iyo qoysaska waxay fursad u leeyihiin inay sahamiyaan dabeecadda, helaan hibooyin cusub, isku dayaan waxqabadyo cusub, helaan xorriyad, iyo inay yeeshaan saaxiibtinimo waarta iyo xusuuso. Waxay kobciyaan horumarka dabeecadda iyada oo loo marayo qiyamadeena asaasiga ah: Daryeelka, Daacadnimada, Xushmadda, Mas'uuliyadda iyo Sinnaanta.
Farshaxanka Juxtaposition - JXTA, waxay qiimo sare ku fadhidaa barashada iyadoo la sameynayo maxaa yeelay waxay ogyihiin in farshaxanada da 'yarta ah ay waxbartaan kuna koraan kartidooda asaasiga ah iyagoo u maraya khibradaha. Waxay bixiyaan meel badbaadsan, la-talin, xiriirro xirfadeed iyo hal-abuur, iyo sidoo kale qalab loogu talagalay dadka dhallinyarada ah inay ku tababaraan xirfadda halista ah ee fikradahooda hal-abuurka ah ugu beddelaya farshaxan si buuxda loo xaqiiqsaday iyo alaabooyin naqshadeynta ah. Qaar ka mid ah xulashooyinka wax ku oolka ah ee la heli karo.
Dugsiga MPS Credit Academy - Credit Academy wuxuu ardayda siiyaa fursad ay ku kasbadaan dhibcaha dugsiga sare ee seegay hab madadaalo, dabacsan iyo qaab kale. Macallimiintu waxay siiyaan fursado gaar ah oo cusub ardayda si ay u koraan oo wax u bartaan xagaaga oo dhan. Waxaa jira laba ikhtiyaar oo la heli karo: Akadamiyadda FlexCredit ama Soo-celinta Deynta. (Ardaydu waa inay uqalmaan inay kaqaybqaataan. Fadlan la xiriir la-taliyaha dugsiga wixii faahfaahin dheeraad ah.)
Farshaxanka Juxtaposition - JXTA, muab kev saib siab rau kev kawm los ntawm kev nqis tes ua vim lawv paub tias cov kws kos duab hluas yuav kawm thiab loj hlob hauv lawv txoj kev muaj peev xwm tseem ceeb los ntawm cov kev paub dhau los. Lawv muab qhov chaw muaj kev nyab xeeb, muab kev cob qhia, kev sib cuag yam muaj kev txawj ntse thiab muaj zoo tswv yim, nrog rau muaj cov cuab yeej rau cov tub ntxhais hluas los xyaum tej yam qauv tes tseem ceeb rau kev hloov lawv lub zoo tswv yim tsim los mus kos ua duab uas muaj tseeb thiab tawm qauv rau cov khoom tsim. Muaj qee cov kev xaiv virtual.
Minneapolis Youth Works - Waxay ka caawisaa dhalinyarada iyo dhalinyarada qaangaarka ah inay bartaan nolosha tacliinta iyo xirfadaha shaqada, aqoonsadaan wadiiqooyinka shaqada, iyo inay gaaraan shaqo macno leh.
Teen Teamworks - Teen Teamworks waxay ka caawisaa dhalinyarada iyo dhalinyarada qaangaarka ah 14-24 inay bartaan xirfado shaqo iyo aragti ku habboon gacan ku qabashada mashruuca MPRB iyo tababaro. Dhallinyaradu waxay helaan kormeer tababrka shaqoah, kulamada u diyaargarowga shaqada, adeegyo waxbarasho, waxayna kasbadaan mushahar labadii toddobaad ah.
Walker Art Center High School Teen Paid Summer Intern Program - Kaamka xagaaga ee Lacagta la bixiyo ee Sophomores-ka, Juniors-ka iyo Senior-ka. Baro sida matxafyadu u shaqeeyaan, la kulan fanaaniintayaal oo samee farshaxan. Uma baahnid inaad noqotid fannaan, kaliya waxaad xiiseeysaa barashada farshaxanka.